विचार समाजवाद र समृद्धिको मुद्दा | चितवन पोष्ट
विचार समाजवाद र समृद्धिको मुद्दा
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भाष्य उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, हाम्रो समृद्धिको आधार समाजवादमा आधारित हुनेछ । समाजवाद मूलतः त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ सरकारहरु जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन्छन् ।
गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत, उत्पीडित जनतालाई ध्यान दिएर नीति निर्माण हुन्छन् । आधारभूत आवश्यकताहरु जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रहरुमा राज्यको भूमिका निर्णायक हुने गर्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका समाजवादजस्ता शब्दहरु र यिनका परिभाषा साँच्चै नै मनमोहक लाग्ने गर्छ । तर, के संविधानमा उल्लेखित यस्ता शब्दहरुको गाम्भीर्यता बुझ्ने ल्यागत हाम्रा शासकले राख्छन् ? के हाम्रो राज्य संयन्त्र यस्ता शब्दका मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता राख्छ त ? मुख्य प्रश्न यहाँनेर छ । बीपी कोइरालाले संविधानकै एक प्रसंगमा भन्नुभएको छ– म संविधानका शब्दहरु पढ्छु, तब म संविधानका चिसा शब्दहरुमा प्रतिबिम्बित मानिसका न्याना भावनाहरु देख्ने गर्छु, अनि लाग्छ ती जीवन्त भावनाहरुबिना यी चिसा निर्जीव शब्दको के अर्थ ? हो, संविधानका शब्दहरुको मह¤व तब हुन्छ जब यसले मानिसका भावना, इच्छा र आवश्यकतालाई व्यवहारमा उतार्ने सामथ्र्य राख्छ ।
विगतका सात दशकमा हामीले सातवटाभन्दा बढी संविधान निर्माण गरिसकेका छौँ र प्रत्येकपटक शासकहरुले जारी भएको संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भन्ने गरेका छन् । अहिलेको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरिएको छ, तर विडम्बना ! यिनै शासक हुन् जसले २०४७ सालको संविधानलाई पनि हिलोमा फुलेको कमल भन्ने गर्थे । नेताहरुको यस्तै अस्थिरताले प्रत्येक एक दशकमा एउटा संविधान निर्माण गर्न हामी बाध्य भैरहेका छौँ ।
लोकतन्त्र, राज्यको चरित्र र समाजवाद
आवरणमा हेर्दा नेपालको शासनपद्धति लोकतान्त्रिक नै देखिन्छ । शासकहरु निर्वाचनका माध्यमबाट निर्र्वािचत भएर आएका पनि छन् । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व आदिले गर्दा संविधानले जनतालाई अधिकार दिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ, तर संविधानले जसरी समाजवादको परिकल्पना गरेको छ त्यसको यथार्थबाट भने हामी निकै टाढा रहेको देखिन्छ । माथि नै उल्लेख गरिएअनुसार समाजवाद भन्नेबित्तिकै जनताको जनजीविकाका सवाल र आधारभूत आवश्यकता जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा राज्यको प्रमुख र निर्णायक भूमिका हुन्छ ।
२०४६ सालपछि सत्तामा आएका शासकहरुले समाजवादको नाउँमा निजीकरणको अभियानलाई खुल्ला गरे, जसले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही संख्यात्मक परिवर्तन त ग¥यो तर गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । च्याउजसरी खुलेका बग्रेल्ती निजी विद्यालयहरुले शिक्षित र पठितको संख्या बढायो, तर व्यावहारिक शिक्षाको अभावमा आज पनि हाम्रा युवाहरु विदेशका गल्लीहरुमा भौँतारिन बाध्य छन् । कथित अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाउँमा हाम्रा स्थानीय सीप, ज्ञान र कौशललाई नकार्दै विदेशीको प्रोजेक्टरुपी शिक्षा प्रणाली लागू गरियो र यसको परिणामस्वरुप आज हाम्रा जल, जंगल, जमिन त्यसै खेर गैरहँदा हामी भने विदेशमा हाम्रा युवापुस्तालाई लिलामी गर्दैछौँ । कथित निजीकरणको यो अभियानले शिक्षामा दुई वर्गको निर्माण गर्दै लगेको देखिन्छ । निजीमा पढेका एक वर्ग र सार्वजनिक विद्यालयमा पढेका अर्को वर्गले दीर्घकालसम्म समाजलाई विभाजित गर्ने पक्का छ । राज्य गुणस्तरीय शिक्षा दिने आफ्नो दायित्वबाट निरन्तर भागिरहेको छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु चरम राजनीतिको सिकार भएर निरन्तर धराशायी हुँदै गएका छन् भने नेता र पार्टीकै सासंद्हरु निजी विद्यालय र कलेजका सञ्चालक भएर बसेका छन् ।
समाजवादको नाममा भैरहेको यो लुटतन्त्रबाट हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अछूतो रहन सकेको छैन । निजी मेडिकल र सरकारी अस्पतालबीचको खाडल निकै ठूलो छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर, गरिब र निमुखाका निमित्त निजी मेडिकल कुनै तिलस्मी भवनजस्तो लाग्छ, जहाँ प्रवेश गर्ने सामथ्र्य ऊ राख्दैन । सरकारी अस्पतालको बेथितिबारे हामी सबै जानकार नै छौँ । स्वास्थ्य अहिले व्यापारको आकर्षक क्षेत्र बन्दै गइरहँदा कुनै गरिब जेहेनदार छात्र वा छात्रा क्षमता भएर पनि स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको सृजना भैरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसिरहेका छन्, तर सुधारको मुख्य जिम्मा लिएर बसेका हाम्रा सासंद्हरु यसबारे मौन छन् । प्रगतिशील कानुनको निर्माण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल बनाउने जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधिहरु नै ठूल्ठूला मेडिकल संस्थाका सञ्चालक भएर बसेका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा भैरहेको यो चरम व्यापारीकरणले समाजवादको हाम्रो लक्षलाई हरदम गिज्जाइरहेको छ । सार्वजनिक यातायात, रोजगारीलगायत अन्य जनचासोको विषयमा पनि सरकार र नागरिकबीचको दूरी निरन्तर बढ्दै गैरहेको छ ।
ठूला व्यापारी, ठेकेदार र तस्करसँग सत्ताको गठजोडले आममानिसका मुद्दाहरु निरन्तर ओझेलमा पर्दै गैरहेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रैबाट यस्ता विकृतिहरु फैलिरहँदा यसले लोकतन्त्रको विद्यमान मोडेलप्रति नै प्रश्न उठाउँदै लगेको देखिन्छ । नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाहरु अक्षरशः पालना हुने कुरामा पनि शंका उब्जिएको छ । राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालमा आइपुग्दा पनि हाम्रो सत्ताको चरित्रमा कुनै फेरबदल आउन सकेको छैन । हामी जस्तो रूग्ण मानसिकता लिएर हिजो सत्ताको अभ्यासमा थियौँ, आज पनि हाम्रो मानसिकता उस्तै छ । राजसंस्था फालेर आएका हाम्रा अहिलेका नेतृत्वले आफूलाई त्यही स्थानमा राख्न खोजिरहँदा हजारौँ बलिदानीपश्चात् प्राप्त अहिलेको परिवर्तन गुम्ने खतरा देखिँदै छ ।
वर्तमान सरकारको दिशा
वर्तमानको ओली सरकार संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो । वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अभिभारा पनि सरकारकै काँधमा छ, तर सरकार गठन भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि सरकारले अपेक्षित ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकेको आभास पाइएको छैन । सरकारले सिन्डिकेट खारेजी, सुन तस्करको पर्दाफास आदि केही सकारात्मक कामको सुरूवात गरेको भएता पनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । दिन प्रतिदिन सरकारको आलोचना हुँदै गर्दा संविधानको कार्यान्वयन झन् जटिल बन्दै गैरहेको देखिन्छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच निरन्तर समस्या देखिँदै गएको छ भने उचित कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले गति लिन सकेका छैनन् ।
पहिला मुलुकको सारा समस्याको जड एकात्मक प्रणाली नै भएको जसरी प्रस्तुत गरियो र संघीयतामा गएपछि सारा समस्याको समाधान जादुजसरी हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने चेष्टा नेताहरुले गरे, तर अहिले त्यो भाष्यप्रति जनताको मोह विस्तारै भंग हुँदैछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरी संघात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि केन्द्र सरकार आफ्नो निर्णयलाई जबर्जस्ती लाद्ने काममा उद्यत देखिएको छ । लामो समय एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अभ्यास गरेको अहिलेको वर्तमान नेतृत्व संघीयतासहितको संविधान निर्माण भएपछि आफ्नो राजनीतिक पकड गुम्ने चिन्तामा देखिन्छ, जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरुको खासै चासो देखिँदैन । यसले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
संविधान कुनै पनि मुलुकको मार्र्गिनर्देशक दस्तावेजका रुपमा रहेको हुन्छ । हरेक संविधानले कुनै पनि मुलुकको वर्तमानको समीक्षा गर्दै भविष्यको खाका कोर्ने गर्छ । हाम्रो संविधानले पनि मुलुकलाई समाजवादतर्फ डो¥याउने संकल्प गरेको छ । यो संकल्प पूरा गर्नका निमित्त हामीले हाम्रो शासनको तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । विगतका गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर हामीले आफूलाई परिवर्तन नगरेसम्म हामीले भन्ने गरेको समृद्धि असम्भव छ ।